Colaaddii Baled Xaawo oo la dhameeyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Colaaddii Baled Xaawo oo la dhameeyey
18th June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Baled Xawo – Mareeg.com: Waxaa la dhameystiray dadaalkii todobaadyadii lasoo dhaafay laga waday gobalka Gedo oo lagu xalinayey dagaaladii ka dhacay degmada Beledxaawo.
Waxaa lagu guuleystay in labadii ciidan ee ku dagaalamay Beledxaawo la isku dhafo isla markaana ay markii ugu horeysay si fool ka fool ah isu salaamaan.
Wasiir kuxigeenka gaashaandhiga xukuumadda Soomaaliya, Cabdallah Xuuse Cali iyo madaxweyne kuxigeenka Juballand Gen. Cabdullahi Shiikh Ismaaciil ayaa ku sugnaa munaasabadii lagu heshiisiiyey ciidamadan horey uga wada tirsanaa ciidamada dowlada Federaalka Soomaaliya.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, Cabdalla Xuseen Cali ayaa sheegay in si rasmi ah loo soo afjaray oo heshiis laga gaaray dagaalo dhowaan ka dhacay qaybo ka mid ah degmooyin ka tirsan gobolka Gado.
Xuseen Cabddalla ayaa xsuay in mas’uuliyiinta, saraakiisha ciidammada iyo odayaasha dhaqanka ee degmooyinkaasi ay ballan qaadeen dhaqan galinta heshiis ku salysan iskaashi iyo wada shaqeyn buuxda oo dhexmarta qaybihii walaalaha ah ee ku dagaalamay Belad-xaawo.
Wasiir ku xigeenka waxa uu sheegay in dowladda ay dajisay qorshe lagu hubinayo in aysan dib u soo laaban dagaalo sokeeyo oo ka dhax qarxo beelaha iyo dadka walaalaha ah ee magaalooyinka ku kala nool.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda Beeraha, ayaa waxaa socdaalkiisa ku weheliyey xildhibaanno iyo saraakiil ka tirsan ciidammada xoogga dalka oo qayb ka ahaa isku day lagu doonayo in lagu dhameeyo colaad dhaxmartay dadka deegaanada gobolka Gedo.
Dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa degmada Belad-xaawo ee gobolka Gedo dhowaan ku dhex maray ciidamo kala taageersan maamullada degmooyinka Balad-xaawo iyo Doolow.
Gaari dhaqtar watay oo ku qarxay gudaha Isbitaalka Keysaney
Sawirro: Qaraxii gaari ee ka dhacay Isbitaalka Keysaney